Barcelona oo ay soo wajahday cabsi ah in Messi ay ku wayso si lamid ah sidii ay ku waysay Neymar | SAHAN ONLINE
Barcelona oo ay soo wajahday cabsi ah in Messi ay ku wayso si lamid ah sidii ay ku waysay Neymar
Barcelona ayeey soo wajahday cabsi wayn oo ku aadan in la burburiyo qandaraaska Lionel Messi sidaasna laacibku uu uga tago kooxda.
Maamulaha dhanka dhaqaalaha iyo istiraatiijiyada u qaabilsan Barcelona ee Pancho Schroder ayaa ka cabsi qaba in kooxaha ka soo horjeeda Barca inay bixin karaan lacagta lagu burburin karo qandaraaska Messi ee ah 700 milyan oo euro.
Messi ayaa heshiis cusub u saxiixay kooxdiisa Barcelona bishii November ee 2017, balse kooxda ayaa ka cabsi qabta in qiimahaas uu haatan yahay mid kooxuhu ay bixin karaan.
Wuxuu sheegay in qandaraaska Neymar ay ku xireen lacag dhan 222 milyan oo euro oo ay is lahaayeen lama bixin karo, balse PSG ayaa si lama filaan ah u bixisay lacagtaas.
“Qodob heshiis burburin oo aan rumaysanahay in aan la bixin karin ayaan ku xirnay heshiiska Messi ilaa inta uu ka fariisanayo kubadda cagta” ayuu yiri Pancho Schroder.
“Laakiin sidaas waxaan u leeyahay, sanad ka hor waxaan aaminsanayn inaysan jirin cid bixin karta qiimaha heshiis burburinta Neymar, balse suuqii xaggaaga ayuu ka tagay kooxda, sidaas darteed, waan filan karaa in wax walba ay dhici karaan”.
“Marka la fiiriyo mustaqbalka, waxay u muuqataa inaysan adkaan doonin bixinta qiimaha heshiis burburinta qandaraaska Messi, maalmahaan wax walba waxay noqdeen waali, waxaan filayaa in wax walba ay dhici karaan”.